Naannoo Amaaraa magaalaa Mooxaatti manneen amantaa gubatan - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, AMMA
Pirezidantii Mana Maree Islaamummaa Naannoo Amaaraa Sheh Sa'iid Ahimad kanneen badii kanaan shakkaman irratti tarkaanfiin akka fudhatamu gaafachuun isaanii gabaafameera
Naannoo Amaaraa Godina Goojjaam Bahaa magaalaa Mooxaatti guyyaa kaleessaa manneen amantaa gubachuu jiraattonniifi qondaaltonni BBC'tti himan.
Masjiidonni gubatan Masjiida Jami'ul Heyraatiifi Masjiida Ayyar Maarafiyaa Taallaaquu Masjiid jedhaman akka ta'e dubbatu jiraattonni dubbifne.
Komishinii Poolisii Naannoo Amaaraatti ajajaan qajeelcha Ittisa yakkaa Komaandar Jamaal Mokonniin BBC'tti akka himanitti immoo masjiidonni gubatan 3 dha.
Kanneen kana raawwatan ibidda bataksaana keessa mudate erga dhaamsanii booda namoonni gareen socho'ani masjiidota irratti haleellaa akka raawwatan himan.
''Yeroo ammaa hojiin hawaasa tasgabbeessuufi mariisisuu taasifamaa jira,'' jedhan. Hanga yoonaa namni badii kanaan to'atame akka hin jirrellee himan.
Dabalataanis, gamoon 'Maar Zannaba' jedhamuufi waldaatin ijaarame daawwitiin isaa caccabuufi akka balaan ibiddaan gubachuu isa mudate ibsan.
Akka Maas Miidiyaan Naannoo Amaaraa Pireezidantii Mana Maree Dhimmoota Islaamummaa Naannoo Amaaraa Sheeh Sa'iid Ahimad waabeffachuun gabaasettimmoo masjiidonni gubatan afuridha.
Akka gabaasa kanaatti, Sheeh Sa'iid ibsa har'a kennaniin kanneen kana raawwatan irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu gaafataniiru.
''Magaalaa Mooxaa keessatti jireenyi hawaasa kiristaanaafi Musliimaa kan cimedha. Wanti raawwate jiraattota magaalaa Mooxaa bakka hin bu'u'' jechuun ibsuu isaanitu gabaafame.
Miseensi mana maree magaalaa Mooxaa Haji Yuunus Idriis madda ibidda kanaa akka hubachuu hin dandeenye BBC'tti himaniiru.
''Suuqiiwwan Musliimaa filatamaati gubatan. Lafa shaqaxa 'araat be araat' jedhamanitti gamoon lama guutuun gubataniiru, saamamaniru. Manneen qorichaa Musliimaa akkasumas konteenaroonni gubataniiru, saamamaniiru'' jedhan.
Barsiisaan magaalicha keessa jiraatan biraa dubbifne immoo ''kan gubate suuqii musliimaa qofa miti. Fakeenyaaf suuqiin maatii haadha warraa kiyyaallee gubateera,'' jedhan.
Jiraattonni dubbifne kaleessa waaree booda naannoo sa'aatii 11:00 mana Kiristaanaa Goorgisii keessatti yeroo barnoonni kennamaa jirutti bataskaana gubbaa ibiddi mul'ate.
Jiraattonni sana balleessuuf yeroo jedhanitti gidduutti hookkarri dhalachuu jiraataan naannoo bataskaanichaa ta'e BBC'tti himeera.
Hoteelota akkasumas dhaabbilee daldalaa irratti miidhaan dhaqqabuu jiraattonni himaniiru.
Jiraataan kun inumaa ibidda bataskaana irratti dhalate dhaamsuu irratti Musliimonni baay'ee akka hirmaatan ibsu. ''Har'umayyuu jaarikaana nuuf kennuuf jedhani dhufaa turan. Hunduu naguma ture,'' jedhu.
Wanti kaleessa raawwate dargaggoonni miira keessa seenuun tasa waan mudate malee ''masjiida gubuun kan itti yaadame miti'' jechuun ibsu jiraataan dubbifne.
Akka isaan jedhanitti jalqaba batsakaanni Goorgisii erga gubate booda waldhibdeen bifa amantii qabatee masjiidonni gubataniiru.
Hoteellii tokkoofi suuqiiwwan akka gubatanifi yaaliin saamichaas akka ture himu.
Jiraataan kuni akka jedhanitti yeroo ammaa polisiin seenee tasgabbeessuuf akka jiru ibsun lubbuun namaa darbe akka hin jirrellee himan.
Rakkoo dhalateen qabeenyi Musliimaas Kiristaanaas badeera jechuun kan ibsan jiraataan kuni ''dargaggoon miiraan oofamuu hin qaban. Ammas ta'u rakkoo keenya araaraan furra. Miiraan oofamuun of balleessudha,'' jedhaniiru.
Haji Yuunus Majiid Ye Ayyar Marafiyaa Taallaaquu Masjiid inni jedhamu ammayyuu (ganama har'aa) gubachaa akka tureefi namoonni 100'tti lakkaa'aman dhaamsuuf yaalaa akka jiran ibsaniiru.
Madda suuraa, MOTTA CITY COMMUNICATION OFFICE
Dargagoon suuqiilee irratti haleellaa erga raawwatan booda gara masjiidawwan akka deemaniifi isaan dhaabsisuun akka hin danda'amne himan.
Rakkoo kaleessa dhalate dura oduun ''musliimonni gamoo maarzannab jeessa jiran bataskaana gubuufi'' jedhu odeeffamaa turuu himu barsiisaan kuni.
Jiraataan dubbifne erga yeroo dhihooti Musliimaafi Kiristaana gidduu rakkoon akka hin turre himu. Ta'us gareewwan Musliimotaa lama gidduu waldhibdeen akka ture himu.
Miseensi mana maree magaalaa Mooxaa Haji Yuunus Idriisis rakkoo kaleessa dhalateef sababa kan ta'u hawaasa Musliimaafi Kiristaana gidduu rakkoon akka hin turre dubbatu.
Garee hawaasa Muslimaa lama gidduu garuu rakkoon akka mudate himanis kan kaleessa raawwate waliin walitti dhufa jedhanii akka hin tilmaamne himu.
Jiraataan naannichaa biraa dubbisnees hawaasa Kiristaanaafi musliimaa gidduu rakkoon akka hin turre himu.
Haa ta'u malee, yeroo dhihoo as musliimota duraan turan 'Korafii' jedhamaniifi Wahaabii kanneen jedhaman gidduu waldhibdee dhalate furuuf mariin taasifamaa akka ture dubbatu.
''Har'a Mooxaaf guyyaa gaddaati. Kisaaraa hawaasummaa guddaatu nu mudate. Obbolaa musliimota keenya gaddisisneerra'' jechuun barsiisaan dubbisne gadda isaanii ibsan.
Qondaaltonni magaalaa Mooxaa garaa garaa odeeffannoo akka nuuf kennan bilbille walgahiirra waan jiranif nutti dubbachuu hin dandeenye.
Finfinnee: Masjiidni guddichi Anwaar balaa ibiddaa irraa hafe